डार्क चकलेट संग कुकीज, स्वादिष्ट! | बेजिया
मारिया vazquez | 14/09/2021 10:00 | Postres
शरद तु एक धेरै छ कुकीज पकाउने राम्रो समय। Bezzia मा, हामी ओभन खोल्दा कहिल्यै अल्छी छैनौं, तर हामी बुझ्दछौं कि ती ठाउँहरुमा जहाँ गर्मी थिचिरहेको छ, यो तपाइँको लागी अधिक गाह्रो हुनेछ। त्यसोभए यदि तपाइँ यो अझै सम्म हुनुहुन्न भने, पछि को लागी डार्क चकलेट कुकीज को लागी यो नुस्खा बचत गर्नुहोस्।
Bezzia मा हामी प्रतिरोध गर्न सकेनौं। हामी एक मित्र पछि तुरुन्तै ब्यापार गर्न तल, यी कुकीहरु कोसिस गरे पछि, हामीलाई उनको नुस्खा निर्देशित। तिनीहरू साधारण कुकीज हुन्यसबाहेक, तिनीहरू डराउने छैनन्। तपाइँलाई चाहिन्छ, हो, सामग्री को एक राम्रो मुट्ठी तिनीहरूलाई बनाउन को लागी।
तपाइँ कसरी यी कुकीहरु को जाँच गर्न को लागी समय छ एक छ चीनी को धेरै उदार मात्रा, त्यसैले यो उनीहरुलाई हरेक दिन खान को लागी सुविधाजनक छैन। तर उनीहरु हामीलाई एक मीठो उपचार, धेरै मीठो दिनको लागी शानदार छन्! उनीहरुसँग एक कुरकुरा बाहिरी र एक उत्तम cuddly भित्री छ। हामी अरु के सोध्न सक्छौं? के तपाइँ चिनी रहित कुकीहरु मनपर्छ? परीक्षण तपाई बदाम हुनुहुन्छ.
1 सामग्री (२० एकाइहरु को लागी)
सामग्री (२० एकाइहरु को लागी)
१ g० g ब्राउन सुगर
G 50 g सेतो चिनी
१ अण्डा + १ अण्डाको जर्दी
२ g० g बल आटा
As चम्मच बेकिंग सोडा
आधा कुचेरियाटा डे साल
२ g० g गाढा चकलेट
मक्खन पिघ्नुहोस् मध्यम गर्मी र टोस्ट मा एक कटोरी मा। अर्को, एक ठूलो कटोरा मा मक्खन डाल्नुहोस् र यसलाई चिसो दिनुहोस्।
जब मक्खन कोठा को तापमान मा छ, चीनी जोड्नुहोस् र केहि छडहरु संग मिश्रण ह्यान्डहेल्ड वा बिजुली।
त्यसो भए अण्डा मिलाउनुहोस्, अण्डाको जर्दी र भेनिला सार र फेरि एक सजातीय जन प्राप्त गर्न हरायो।
पछि बलियो आटा जोड्नुहोस्, गहुँको पीठो, खमीर, बाइकार्बोनेट, नुन र जायफल को चुटकी र आन्दोलनहरु संग मिश्रण जब सम्म उनीहरु राम्रो संग आटा मा एकीकृत गरीन्छ।
अन्ततः, चकलेट को टुक्रा मा काट्नुहोस् एक चाकू संग र यसलाई जोड्नुहोस्।
पकड्न दुई चम्मच प्रयोग गर्नुहोस् अखरोट आकार पकौडा कि तपाइँ एक थाली वा ट्रे ग्रीसप्रूफ कागज संग लाइन मा छोड्नुहुनेछ। त्यसपछि, डिश वा ट्रे फ्रिज मा ३० मिनेट को लागी राखे ताकि आटा कडा हुन्छ।
अहिले, ओवन 180ºC मा preheat र चर्मपत्र कागज संग पकाउने ट्रे लाई।
यो मा आटा को बलहरु, संग राख्नुहोस् दुई औंलाहरु एक र अर्को बीच अलग ताकि जब गर्मी संग विस्तार उनीहरु टाँसिएनन्।
ओवनमा ट्रे लिनुहोस् र १º० डिग्री सेल्सियस मा १२ मिनेट पकाउनुहोस् वा किनाराहरु सुनौलो नभएसम्म।
अन्तमा, उनीहरुलाई ओवन बाट बाहिर निकाल्नुहोस् र उनीहरुलाई १०-१५ मिनेट आराम गर्न दिनुहोस् चिसो समाप्त गर्न को लागी एक रैक मा स्थानान्तरण गर्नु अघि।
डार्क चकलेट कुकीज, एक्लै वा कफी, दूध वा एक तरकारी पेय संग आनन्द लिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » Postres » डार्क चकलेट संग कुकीज, स्वादिष्ट!